K'CHO ETHNIC ASSOCIATIONS
အစည်းအရုံးအားလုံး၏ တံဆိပ်နှင့် Logo မှာ တခုတည်းဖြစ်သည်။ အောက်ချင်းငှက် ဦးခေါင်းပိုင်း ကိုယ်တပိုင်းပုံ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားထုအားဦးဆောင်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခြင်း ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်သည်။
အစည်းအရုံးများ၏ အလံသည် ချိုးအမျိုးသားအလံ ဖြစ်သည်။ ချိုးအမျိုးသားအားလုံးတွင်အလံတော်တခုတည်းရှိ သည်။
၁။ ချိုးအမျိုးအနွယ်များ မပျောက်မပျက် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး ၂။ ချိုးအမျိုးသားများ စုစည်းညီညွတ် ချစ်ကြည်ရေး ၃။ ချိုးအမျိုးသားအချင်းချင်းဖြစ်စေ၊ အခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့်ဖြစ်စေ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး ၄။ ချိုးအမျိုးသား၊ ချိုးဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် သာယာဝပြောရေး
၁။ နိုင်ငံတနိုင်ငံတွင် အစည်းအရုံးတခု ထားရှိရမည် ၂။ နိုင်ငံများစုပေါင်းခြင်းကိုလည်းခွင့်ပြုသည်၊ ဥပမာ - ဥရောပ ၃။ အစည်းအရုံးမဖွဲ့နိုင်သေးသောနိုင်ငံများ နီးစပ်ရာနိုင်ငံတွင်ပါဝင်ခြင်းကိုလည်းခွင့်ပြုသည် ၄။ မိမိတို့အစည်းအရုံးအလိုက် Rule and Regulation ပြဌာန်းရမည်။
၁။ ချိုးအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်စာရင်း ထိမ်းသိမ်းရန် ၂။ ချိုးတိုင်းရင်းသားကောင်စီနှင့် ချိုးပြည်သူ့တပ်မတော်အတွက် လူထုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ၃။ အစည်းအရုံးအတွင်း လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များကို စုပေါင်းတိုင်ပင် လုပ်ဆောင်ရန် ၄။ ချိုးတိုင်းရင်းသားကောင်စီသို့ လိုအပ်သောကိုယ်စားလှယ် ရွေးချယ်စေလွှတ်ရန်
1. KCHO ETHNIC ASSOCIATION OF <?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />AUSTRALIA (CEAA)
2. KCHO ETHNIC ASSOCIATION OF CANADA (CEAC)
3. KCHO ETHNIC ASSOCIATION OF EUROPE (CEAE)
4. KCHO ETHNIC ASSOCIATION OF INDIA (CEAI)
5. KCHO ETHNIC ASSOCIATION OF U.S.A (CEAU)
6. K'CHO ETHNIC ASSOCIATION OF MALAYSIA (CEAM)
ချိုးအမျိုးသားတိုင်း အစည်းအရုံးဝင် ဖြစ်ရမည်။ မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစည်းအရုံးရှိချိုးအမျိုးသားမှတ်ပုံတင် စာရင်းသို့ သတ်မှတ်ထားသော မိသားစုဆိုင်ရာအချက်အလက်များပေးပို့ခြင်း၊ ဖြည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အစည်းအရုံးဝင် ဖြစ်သည်၊
အစည်းအရုံးဝင်များ၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ
ချိုးအမျိုးသားတစ်ဦး ရရှိခံစားရမည့်အခွင့်အရေးမှန်သမျှ အပြည့်အ၀ရရှိရမည်။ ထိုနည်း တူစွာချိုးအမျိုးသားတစ်ဦး ထမ်းဆောင်ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားကိုလည်း အပြည့်အ၀ ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ရမည်။ Back to Oraganizations page